नेपालमा आइसोलेसनमा राखिएका २ जनाको मृत्यु, काे हुन उनीहरू ? – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमा आइसोलेसनमा राखिएका २ जनाको मृत्यु, काे हुन उनीहरू ?
नेपालमा आइसोलेसनमा राखिएका २ जनाको मृत्यु, काे हुन उनीहरू ?
14,4962minutes read
आरडीटी विधिबाट ९ हजार ४ सय ७३ जनाको परीक्षण भएको प्रदेश १ मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश १ मा तीन ठाउँबाट पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ । हालसम्म नेपालमा ३८५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये ३६ जना निको भएका छन् भने बाँकेमा एक र सिन्धुपाल्चोकमा एक गरी दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।source imandar media
के आमा बन्दै छिन् काजल अग्रवाल ? गरियो यस्तो अनुमान
वैशाखमा पनि पुस माघकै जस्तो चिसो, किन बिग्रियो मौसम ?